Xarfaha Ruushka ee Cyrillic wax sir ah kuu hayn maayo
Magacaygu waa Karine Avakova waxaanan kuu noqon doonaa tababarahaaga koorsadan taas oo kuu oggolaan doonta inaad wax ka yar saacad ku barato sida loo akhriyo afka Ruushka. Luuqada Ruushka waa afkayga hooyo, waxaan ku noolaa Ruushka 16 sano. Waxaan qaadanayaa koorsadan maxaa yeelay waxaan aad u xiiseeyaa luqadaha qalaad iyo waxbarista. Waxaan ku hadlaa Ruush, Ingiriis, Faransiis iyo Isbaanish. Waxaan horeyba u caawiyay daraasiin faranfoono ah inta lagu gudajiray casharrada gaarka ah. Waan ku farxi doonaa inaan kaa caawiyo koorsadan khadka tooska ah.
Waxaan ku bilaabi doonaa adiga oo ku soo bandhigaya alifbeetada Ruushka iyo dhawaaqa ruushka. Markaas waxaan kaa caawin doonaa inaad si dhakhso leh u xafido xarfaha iyo codkooda. Taasna wax uga roon ma ahan in loo adeegsado macne ahaan, sawirro iyo isbarbardhig xarfaha aan horay u ogaanay. Si dhakhso leh ayaan u wada bilaabi doonnaa akhriska.
Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee abaalmarinta ah, waxaan kuugu soo bandhigi doonaa sirahayga qarsoon ee ii oggolaaday inaan si dhakhso leh u barto 3 luqadood oo ajnabi ah. Fiidiyowgaan gunnada ah kaligiis ayaa u qalma leexashada ...
Baro inaad wax ku aqriso in kayar 1 saac Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeGanacsade Vs Freelance: quraafaad sii socota
socdaSida loo sameeyo qaansheegad aan lagaran karin